Global Voices teny Malagasy » Nalaina An-keriny Tamin’ny Herintaona, Manasongadina Ny Fanitsakitsahana Ny Zon’Olombelona Ao Laos Ny Raharahan’i Sombath Somphone · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Desambra 2013 4:20 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Laos, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Fihetsiketsehana teo anoloan'ny masoivohon'i Laos ao Bangkok. Sary tao amin'ny pejy Facebookn'i Joey Oliveros Dimaandal.
Herintaona katroka izay no nalain’ olon-tsy fantatra i Sombath Somphone, mpahay toekarena momba ny fampandrosoana sady mpampianatra avy ao Laos, fotoana fohy taorian'ny fiaran'ny polisy nanakana azy. Azo sary tamin'ny alalan'ny fakàntsary fanaraha-maso CCTV ny fanjavonany . Nangataka tamin'ny governemantan'i Laos androany ny fianakaviany sy ireo namany manerantany mba hanao hetsika mivaingana hahitàna an'i Sombath.
Herintaona androany 15 desambra ny fakàna ankeriny imasombahoaka an'i Sombath izay hita tamin'ny fakàntsary fanaharaha-maso. Nahoana no mbola tsy manam-baovao omena anay ny governemantan'i Lao hatramin'izao?
Mampiseho polisy nanakana azy ny fakàntsary fanaraha-maso kanefa mitsipaka ny fandraisana anjara amin'ny fampanjavonana azy ny governemanta na dia eo aza ny fanerena iraisam-pirenena
Miampanga ny governemantan'i Laos ho manafin-javatra mikasika ity raharaha ity ny Vondrona Mpiaro ny firaisankinan'ny vahoakan'i Azia:
Tazoninay ho tompon'andraikitra tamin'ny fampanjavonana azy ny governemanta. Ny fisafotofotoan'ny fanambarana politika nataon'ny governemanta mikasika ity raharaha ity dia manaporofo ny fijerinay fa misy ifandraisany amin'izay zava-nitranga tamin'i Sombath Somphone izany. Mifanamby amin'ireo manampahefanan'i Lao izahay, amin'ity indray mandeha ity ihany, mba hanao hetsika sy fandraisana andraikitra azo itokisana amin'ity raharaha ity. Tokony hanenjika ireo olona sy andrim-panjakana izay tompon'andraikitra tamin'ny fampanjavonana azy ny governemanta
Nolavin'ny governemantan'i Laos ny filazana fa voasaringotra tamin'ny fanjavonan'i Sombath izy.
Nanazava i Nalaka Gunawardene fa tsy mpikatroka i Sombath:
Tsy mpanao politika i Sombath. Ary tsy mpikatroka ihany koa izy, na dia misy aza ireo manome azy izany mari-pamantarana izany. I Sombath fantatro dia mpihevitra mora tohina izay maka fotoana mandinika hoe mitodika mankaiza ny fitondrana ny fireneny sy izao tontolo izao. Mpampianatra sy mpanolo-tsaina ihany koa izy izay nanampy olom-pirenena tanora an'arivony olom-pirenena Laos mba hanatsara ny fahaizan'izy ireo avy sy hahitan'izy ireo ny feony manokana.
Tamin'ny fanamarihana tao amin'ny Facebook, nampanantena an'i Sombath i Anne-Sophie fa hotohizan'ireo namany ny fiarovana [fisoloam-bava]  mandra-pahita azy:
Hoy izay olona izay nilaza fa «izay namoy ny ainy dia maty indray mandeha ihany, maty isan'andro foana kosa izay nanjavona”. Tsy ekenay ny hisehoan'izany indray. Izany no mahatonga anay manomboka izao resaka izao aminao androany. Ary hitohy izany adihevitra izany, isan'andro, mba ho velona ianao. Maro ny vitanao tamin'ny fanomezana fitenenana hoan'ny vahoaka tamin'ny firotsahanao an-tsehatra. Fotoana hoan'ny hafa izao mba hanomezana fitenenana ho anao. Tsy hanjaka ny fahanginana. Satria tsy hanadino mihitsy izahay. Satria manana fanantenana izahay.
Return #Sombath  #Somphone  rally at #Laos  embassy pic.twitter.com/QcuQ1H3NG9 
Fihetsiketsehana Miverena Sombath Somphone manoloana ny masoivohon'i Laos
Herintaona izay taorian'ny fampanjavonana nihatra tamin'i Sombath Somphone.
Nandritra izany, fikambanana tsy miankina 62 ao Azia-Pasifika no nanasonia fanambarana mandrisika ny governemantan'i Laos mba hanangana andry vaovao  hanao famotorana momba ny fanjavonanan'i Sombath:
Atsangano ny vaomiera vaovao hisahana fanaovana famotorana haingana, lalina, mahaleotena, ary tsy mitanila mikasika ny fampanjavonana an'i Sombath ary hamerina azy salama tsara eny anivon'ny fianakaviany.
Mandefasa fanasana hoan'ny Vondron'asan'ny Firenena Mikambana Misahana ny Fanjavonana sy ny Fampanjavonana mba hitsidika ny firenena
Mbola tsy fantatra izay toerana misy an'i Sombath ary tsy misy fivoarana ny fizotry ny famotorana mikasika ny toe-draharaha tamin'ny fampanjavonana azy. Fanampin'izany, nolavin'ireo manampahefana ny fanolorana fanampiana ara-teknika mba hanadihadiana ilay fakàntsary fanaraha-maso.
Manantena i Rajaretnam fa hangataka fanampim-balinteny marobe avy amin'ny governemantan'i Laos ny Fikambanan'ny Firenena Azia Atsimo na ASEAN :
Taorian'ny herintaona nanginana, tokony horaisina ho fanararaotana hahazoana fanonerana ho an'i Sombath ity fanambarana ity. Raha afaka nanjavona tao anatin'ny andro mazava i Sombath Somphone, dia mety hahazo na iza na iza izany. Amin'ny anaran'ny fahamendrehana maha-olombelona, manan-jò hahazo valinteny mazava avy amin'ny fitondran'i Lao ny governemantan'ny ASEAN sy ny mpiray miombon'antoka aminy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/12/31/55819/
 December 12, 2013: https://twitter.com/commonmolly/statuses/410978871765254145
 December 11, 2013: https://twitter.com/thinink/statuses/410753307284484096
 Miampanga : http://www.scribd.com/doc/191593631/Solidarity-Message-of-SAPA-Working-Group-on-ASEAN-on-the-first-year-commemoration-of-Sombath-Somphone-s-disappearance
 Nanazava : http://collidecolumn.wordpress.com/2013/12/15/when-worlds-collide-95-waiting-for-sombath-somphone/
 fanamarihana : https://www.facebook.com/findsombatsomphone
 fiarovana [fisoloam-bava]: https://www.facebook.com/findsombatsomphone/posts/330403193765051
 December 15, 2013: https://twitter.com/DebbieStot/statuses/412073430909845504
 December 15, 2013: https://twitter.com/pablosolon/statuses/412074580564385792
 andry vaovao: http://sombathdotorg.files.wordpress.com/2013/12/13-12-13-fidh.pdf